ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးလူငယ်များသို့ Up ကိုပြီးနောက်အောင်မြင်နည်း
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 10 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဘင်အကိုပယ်ရှား & ဂျယ်ရီရဲ့. နှင့်တစ်ရှူးများ၏ box ကို. အဲဒီမှာထွက်ရအတူတကွပြန်သင့်အသက်သွင်းဖို့အချိန်သည် ဖြစ်.. ၎င်းသည်သင့်အားသင်ချက်ချင်းမျက်စိတစ်မှိတ်၌တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်ရမယ့်ပေါ်ရွှေ့အဘယ်မှာရှိအချို့သောအံ့ဖွယ်အရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ့်သည်. ဒါပေမယ့်ထွက်လာပြီးတက်ကြွစွာသင့်စိတ်ကိုစောင့်သောအားဖြင့်သင်တို့ကိုချိုး-up ခန့်သလောက်စဉ်းစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်အချိန်ကျော်ခံစားချက်တွေကိုလည်းညှိုးနွမ်းစေမည်နှင့်သင်၏နှလုံးပေါ်ကို latching ဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုမျက်မြင်မချည်အောက်ပါ options သုံးခုတို့၏အကူအညီဖြင့်ချိုးမည်:
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်သို့မဟုတ်မိမိဆန္ဒအလျောက်အလုပ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံးသို့မဟုတ်ကောလိပ်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအရောအနှောရှိမရှိ, ကအာရုံစိုက်စောင့်ရှောက်. ထိုအမှုအရာတို့ကိုသင်၏အအနာဂတ်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိရပါနှင့်မထိုအချိန်ကအလွန်ခက်ခဲသည်ဟုခံစားရနိုင်သော်လည်းလမ်းခရီးတွင်အချို့ချိုး-တက်ခွင့်မပြုပါ. သင်တို့ကိုလည်းဖြစ်နိုင်သည်ညနေခင်းလူတန်းစားကြာနိုင်တယ်. ကိုယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထွက်မဝတ်ကြဘူး. သင့်အဘို့အနိုင်ပါပဲအဘယ်အရာကိုသာယူ!
သင်ဂရုစိုက်လူများတို့နှင့်အတူထွက်စကားပြောပါ. ပြင်ပကမ္ဘာမှတစ်တောင့်တင်းအထက်နှုတ်ခမ်းပေါ်ချပြီးချိန်တွင်ကိုဖြိုခြင်းနှင့် break-up ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအားနည်းချက်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှထွက်စီးဆင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အတွက်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိသေး၏. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့စိတ်နှင့်သင်သိရှိမရှိထွက်ရရန် bursting သောသူတို့ကိုသင်၏မျက်ရည်သည်သင်တို့၏ဦးခေါင်းများကိုရှင်းလင်းသို့မဟုတ်မည်မဟုတ်. ဒါကြောင့်လူအတော်များများသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးချိုး-up ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါကကျန်းမာသောမယ်. အလှည့်၌သင်တို့ကိုထိခိုက်စေသလဲဆိုတာခန့်သင့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေရဲ့စကားပြောနေတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုတစ်ဦးငြိမ်သက်စွာအများကြီးပိုပြီးတောက်ပတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တောက်ပတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကမ္ဘာအပေါ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်.
သင်နာကျင်တဲ့အခါတစ်ခါတလေကပျော်စရာရှိသည်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်သည်ကိုသိရ. ဒါကြောင့်အဆုံး၌တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်ကြောင့်သို့သော်တဆင့်တွန်းအားပေးရန်သင့်အခက်ခဲဆုံးကြိုးစား. အပြင်ထွက်သည် (သင်ချိုးဖဲ့မဟုတ်ပါဘူးသည့်အခါ!) နှင့်အရက်ဆိုင်တွင်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်မွေ့, တေးဂီတပွဲများသို့မဟုတ်ဂီတမှာ, စသည်တို့ကို … အိမ်မှာကိုယ့်ပြဿနာတွေ Leave. စိတ်ဝင်စားသင်ကိုယ်တိုင် Keep တွေဖြစ်တဲ့စာဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဝါသနာနှင့်အတူပျော်ရွှင်, ဂီတနားထောင်ခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်. သင်ပြုတခါပြန်သင်ဘယ်မှာရှိဖို့ခက်ခဲတဲ့လမ်းဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ဖြစ်ကြသည်လူတစ်ဦးဖြစ်ဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့. အသစ်မေတ္တာကိုရှာတွေ့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အချိန်ကိုယူပါ. အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မည်သူမဆိုဖိအားအောက်တွင်မခံစားရဘူး. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်အတွက်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါစေ.
ကိုယ်တော်၏ Guy ပြောင်းပေးပါရန်မကြိုးစားသင့်အဘယ်ကြောင့်